"Darling, ashade, sizobe sishada ... " "Angifuni ukushada!" Ngifuna ukudla! "Ngesithukuthezi, ukhona emshadweni futhi uthandana!"
Zingaki izindlela zobuqili, izindlela, amasu namaqhinga asetshenziswe ngabesifazane ukuheha amadoda enkululeko enenethiwekhi yomshado! Abaningi babo bakulungele ukusho ukuthatha inkululeko ngenkululeko yabo yokuzikhethela. Futhi abantu abaphikisana kakhulu nabangenakunyakaziswa bafaka imfashini "yomshado womphakathi", ubudlelwane bezivakashi noma uthando ngaphandle kwezibopho. Lesi simo sikuvumela ukuba uzizwe inkululeko engenamkhawulo, ube ngumphathi wesimo futhi uthwale umthwalo omncane. Kodwa abesifazane abaningi abavumelani nokuthi "banamalungelo ezinyoni" esikhundleni sesimo esisemthethweni futhi, bekhathele ukulinda isipho, badlulele noma baqaphele. Ukufeza impumelelo kule ndaba elukhuni kuyosiza ulwazi lwezingqondo zesilisa.
Kungani lo muntu engasheshi ukwenza isipho?
Ayikho imali (ukuzinza)
Kuncomeka kakhulu uma umuntu enamathele ohlelweni lokudala umndeni: kuqala uqoqa imali yendlu, bese kuba ngumuthi, bese ebeletha indodana ezozalwa nomfazi oshadile ngokomthetho. Isisekelo esinamandla sezinto ezibaluleke kakhulu ekuzihloneleni kwakhe kwesilisa - futhi abantu abanamahloni, futhi indodana izoba nokuthile okumele izuze. Kodwa-ke, uma indoda inezinkolelo eziphakeme, kodwa ingasebenzi, imithwalo yemfanelo eguquguqukayo kuhulumeni, izinduna nezinye izinto ezivimbela ukuba afike ezinyaweni, khona-ke lesi simo sithinta. Isibonelo, awukwazi ukushada.
Hamba njengabo bonke abantu! Kodwa omunye akanalo ubusha, kanti abanye bafuna izizathu kanye nezikhathi zokuba "ngo-March cat" isikhathi eside ngangokunokwenzeka. Futhi akukhathaleki ukuthi kukhona umzala omuhle, onomusa, onakekelayo oseduze naye, okwathi iminyaka eminingana manje, ebambelele kuye "ophahleni" wabanye abantu futhi ulindele ukuba ahlale phansi futhi amenze abe ngumkakhe osemthethweni. Ngeke ngikwenze! Zingaki ezungeze izithandani ezithandekayo namantombazane omndeni angenakufinyeleleka. Phela, bangase bangazi ukuthi kukhona indoda emhlabeni ohamba yedwa, futhi ngubani owazi okuningi ngothando.
Indoda ehlushwa yi-syndrome (kunalokho, ijabule), ayasheshi ukubopha inkululeko yakhe ngomshado. Uyakwazisa kakhulu ithuba lokwenza izinqumo ezizimele, kungakhathaliseki umbono womuntu, akafuni ukubika nokuthwala umthwalo wemfanelo. Emadodeni omndeni indoda enjalo ingakwazi ukukhuliswa kuphela ngothando oluthandekayo. Futhi ngenkathi kungenzeki, indoda, ngisho nokuba "emshadweni womphakathi" iminyaka eminingana, iyazicabangela mahhala. Akadingi umfazi. Udinga abasebenzi besondlo.
Ukucabanga okungalungile ngomshado
"Ibhizinisi elihle alibizwa ngokuthi umshado!" - izwi eliwuthandayo lomuntu onjalo. Esimweni sakhe esiseduze, azikho izibonelo ezifanelekayo zemikhaya ejabulisayo, noma kunalokho - amadoda ajabulayo enyunyeni evumelekile. Futhi uma kukhona, khona-ke, bona, abanamahloni, abazi okwamanje ukuthi bangena enkingeni. Ngokuqinisekile akekho ozokhala, ungabopha ifindo, futhi ngeke abeke isitembu kuye "eshadile." Kulula kakhulu futhi kunomusa kakhulu ukuba nobuhlobo obuvulekile: beza, namhlanje ngeyodwa - kusasa nomunye, futhi uma bekunye, abangekho izitembu epasipoti. Ukuphila kungenye! Kungani kubhidliza umshado wakhe?
Okuhlangenwe nakho okungaphumelelanga
Le ndoda yayisivele ishadile, futhi ubuhlobo obuhlulekile bubulethela ubuhlungu obukhulu. Manje bonke abesifazane kuye ezweni elilodwa basuswa: i-bitch, umthengi, umthengisi. Kuwo wonke owesifazane omusha, uyaqaphela ngokucophelela izimfanelo ezingafanelwe, futhi uthola. Kodwa kanjani, ngubani ofuna, uzothola njalo! Izinkolelo zakhe ezimbi ziqinisekiswa, futhi uzifungela ukuthi azikho emishadweni kanye nobuhlobo obuseduze. Manje uthatha umsebenzi wokuphindiselela kubo bonke abesifazane ngenxa yabalimi abahlukumezekile futhi, nakanjani, akekho noyedwa wabo ozomenza abe ngamadoda afanelekile!
Ungamsiza kanjani umuntu enze isipho esilindelwe isikhathi eside?
Inkulumo enenhliziyo kuya kwenhliziyo
Kuyadingeka ukuthi ufunde kumuntu, ingabe uyazi nokuthi ufuna ukushada yini. Mhlawumbe kubonakala kuye ukuthi, kuwe, isitembu esipasipoti akuyona into engelutho. Noma mhlawumbe uyesaba ukukhuluma nawe ngomshado, ngoba awuzange uthinte ngalesi sihloko, futhi ucabanga ukuthi uzokusabisa ngezinhloso zakhe ezingathí sina. Kunoma yikuphi, ingxoxo ecacile izokusiza ukuba uthole izizathu zokunganaki kwakhe. Lokhu kuzosenza sikwazi ukuqhubeka nokwakha amaqhinga namaqhinga afanelekayo.
Uzothola umlingani nabangane abaseduze noma izihlobo zendoda yakho enesithakazelo emndenini wakhe. Umamazala, umfowenu, udadewabo noma umngane wakho omkhulu angaba usizo bakho onokwethenjelwa ekutholeni isimo esisemthethweni. Bakhombise uthando oluqotho lomuntu ongenandaba nabo, uzibonakalise njengomuntu ozithandayo, owesifazane ohlakaniphile futhi uthole ngamunye wabo indlela ethinta umphefumulo wabo. Uma beqonda ukuthi ungowesifazane oyiphupho, umuntu wakho ngeke akwazi ukumelana nokuhlasela kwabo.
Ayikho into ekhuthaza izenzo ezinqumayo ezifana nokwesaba ukulahlekelwa. Uma le ndoda inqume ukuthi usuvele ungowesifazane futhi ngeke ukwazi ukuhamba noma yikuphi, sekuyisikhathi sokuba abonise ukuthi uyiphutha ngokujulile. Kungakhathaliseki ukuthi yizibonakaliso zokunakwa kwamanye amadoda, izingcingo zocingo ebusuku, ukuthandana noma ngisho nemfihlo eyimfihlo - kungcono kuwe. Into eyinhloko ukuthi indoda yakho iyaqonda ukuthi uyisimo "esiphuthumayo somkhiqizo" wesidingo esikhulu kanye nenani, okuzokwenziwa ngqo ukusuka ngaphansi kwekhala lakho uma ehlala ngokuphakamisa isandla nesenhliziyo.
Imibuzo eqondile nezingxoxo ezisebunzini azivunyelwe kubo bonke abesifazane. Ngifuna isinyathelo sokuvela kumuntu. Londoloza i-ego yesifazane izosiza isicu esihle, sigqoke amahlaya. Isibonelo:
Ngemuva kwalokho okwakukhona phakathi kwethu, kufanele ngishade nawe!
Kumuntu omusha wami uyoba yindandatho yomshado efanelekayo!
Bathandekayo! Ngishadile! - Ubani? "Angazi?" Kuwe, yebo!
Ukuntuleka kwesinyathelo samadoda kuye kwahlala kudlule, futhi namuhla abesifazane abasha benza ngesibindi indoda inikeza izandla nezinhliziyo. Uma kusabisa ukuthatha isinyathelo ngokuyinhloko kule ndaba "yesilisa," ungasondela kulesi sicelo ngokuhlekisa. Isibonelo, gqoka i-butterfly kanye ne-butterfly, uthenge izimbali nezimbali zokuzibandakanya, ume emadolweni owodwa futhi uvume ukuthi ufuna ukwenza indoda indoda. Noma sebenzisa inqubo yaseYurophu yasendulo, ngokusho ukuthi owesifazane unelungelo eliphelele lokwenza isipho esisemthethweni kumuntu ngoFebruwari 29. Indoda ngosuku olufanayo ayinalo ilungelo lokulahla.
Imikhuba engu-8 eqinisekisiwe (!) Izokukwenza ucebile
Ukuqagela abalingisi bakho abathandayo endimeni kaSanta Claus: Ungathola ukuthi ubani ofihle ngemuva kwesilevu?
Izindawo ezingu-4 ezivamile lapho ungazijwayela nabathinteli abaphumelelayo
I-Turkish mint lemonade
4 dinner sekwephuzile, okuyinto ngeke ukulimaza lo figure: zama it, okumnandi!
U-Anastasia Volochkova "wavula" amabele akhe ngesikhathi sewele elilandelayo
Yini engingayinika umama
Izinzuzo nokuqeda ukuhlala ngaphandle kwedolobha
Amakhekhe amnandi anama-icing
Izitshalo zangaphandle: hamedorea